ထိပ်ချွန်ကျောက်တိုင်ဂိတ် (စာအုပ်) - ဝီကီပီးဒီးယား
ထိပ်ချွန်ကျောက်တိုင်ဂိတ် (အင်္ဂလိပ်: The Obelisk Gate) သည် အင်ကေဂျယ်မီစင်း ရေး‌သားသော ၂၀၁၆ သိပ္ပံ စိတ်ကူးယဉ် ဝတ္ထု တစ်အုပ် ဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာကွဲ စီးရီးတွင် (ပဉ္စမဥတု ပြီးနောက်) ဆက်လက်ထုတ်ဝေသော ဒုတိယတွဲ ဖြစ်သည်။ ထိပ်ချွန်ကျောက်တိုင်ဂိတ်သည် ဝေဖန်မှုများစွာ ပြင်းထန်ခဲ့ပြီး၊ အရှေ့တစ်အုပ်သည် ဟူးဂိုးဆု၏ အကောင်းဆုံး ဝတ္ထုဆုကို ရရှိခဲ့သည်။
ထိပ်ချွန်ကျောက်တိုင်ဂိတ်သည် (ပဉ္စမဥတု ဟု ခေါ်တွင်သော) ရာစုနှစ်တိုင်းတွင် အကြီးအကျယ် ရာသီဥတု ကပ်ဆိုက်ခြင်း ကြုံရသော တိတ်ဆိတ်ခြင်းဟူသည့် စူပါတိုက်ကြီး တစ်ခုပေါ်၌ အခြေခံထားသည်။ စာအုပ်သည် ကမ္ဘာပျက်ကပ် ဖြစ်လာနိုင်သည့် ဆိုးရွားသော ပဉ္စမဥတုမှ စတင်ထားသည်။ စာအုပ်တွင် အမေနှင့် သမီးဟူသော ဇာတ်ကောင် နှစ်ကောင်ကို အခြေတည်ထားပြီး၊ မှော်ပညာ တတ်မြောက်သော အိုရိုဂျင်းများ ဖြစ်ကာ၊ အနီးစပ်ဆုံး ပဉ္စမဥတု မဖြစ်ခင်ကလေးကမှ ကွဲကွာသွားခဲ့သည်။ တယောက်နှင့် တယောက် ပြန်လည် ရှာတွေ့ရန် ခရီးထွက်ခြင်းများ ပါဝင်ပြီး၊ သူတို့၏ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ပဉ္စမဥတုများ အဘယ်ကြောင့် တည်ရှိနေရသနည်း ဟူသည်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိ ခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၇ တွင် ထိပ်ချွန်ကျောက်တိုင်ဂိတ်သည် အကောင်းဆုံး ဝတ္ထုအတွက် ဟူးဂိုးဆုကို ရရှိသည်။ ဤသည်မှာ ဂျယ်မီစင်း၏ ကမ္ဘာကွဲ စီးရီးအတွက် (၂၀၁၆ က ပဉ္စမဥတု ပြီးနောက်) ဒုတိယကြိမ် ရသော ဆု ဖြစ်ပြီး၊ ဂျယ်မီစင်းသည် ဆယ်စုနှစ် နှစ်စုကျော်အတွင်း အကောင်းဆုံးဝတ္ထု ဟူးဂိုးဆုကို နှစ်နှစ်ဆက်တိုက် ရရှိသူ ပထမဆုံး စာရေးဆရာ ဖြစ်လာသည်။ ထို့ပြင်၊ ထိပ်ချွန်ကျောက်တိုင်ဂိတ်၏ အောင်မြင်မှုသည် အကောင်းဆုံး ဝတ္ထုရှည်၊ ဝတ္ထုလတ်၊ ဝတ္ထုတိုဆုများ ပါဝင်သော ၂၀၁၇ ဟူးဂိုးဆုများတွင် အမျိုးသမီး‌ဇာတ်ကောင်များ အားကောင်းမှု အရွေ့၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဟူးဂိုးဆုအပြင်၊ ထိပ်ချွန်ကျောက်တိုင်ဂိတ်သည် နက်ဗျူလာ၏ အကောင်းဆုံး ဝတ္ထုဆုအတွက် စကာတင် ပါခဲ့သော်လည်း ထိုဆုကို ချာလီဂျိန်းအင်ဒါး၏ မိုးပေါ်က ငှက်တွေအကုန်လုံး (All the Birds in the Sky) စာအုပ်က ရရှိသွားသည်။
↑ Publications၊ Locus။ Locus Online News » 2017 Hugo and Campbell Awards Winners (in en)။ 2017-08-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Christensen၊ Ceridwen။ "The Obelisk Gate Offers No Easy Fix foraBroken World"၊ Barnes & Noble Sci-Fi and Fantasy Blog၊ 16 August 2016။ 12 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Liptak၊ Andrew။ "Women swept nearly every category at the 2017 Hugo Awards"၊ The Verge၊ 11 August 2017။ 11 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Flood၊ Alison။ "Hugo awards 2017: NK Jemisin wins best novel for second year inarow"၊ The Guardian၊ 11 August 2017။ 12 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Britt၊ Ryan။ "This Sci-Fi Author is onaHugo Winning Streak" (in en)၊ Inverse၊ 11 August 2017။ 12 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Whitbrook၊ James။ "The 2017 Hugo Award Winners Are Here"၊ io9၊ Gizmodo၊ 11 August 2017။ 12 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Hugo Award for Best Novel 2017 given to N.K. Jemisin"၊ The Times of India၊ 12 August 2017။ 13 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wilson၊ Kristian။ "N.K. Jemisin Makes Hugo Awards History With 'The Obelisk Gate'" (in en)၊ Bustle၊ 12 August 2017။ 12 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Doctorow၊ Cory။ "2017 Hugo winners: excellent writing and editing by brilliant women"၊ Boing Boing၊ 12 August 2017။ 12 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Liptak၊ Andrew။ "This year's Nebula Award nominees are incredibly diverse – read some online"၊ The Verge၊ 20 February 2017။ 12 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Liptak၊ Andrew။ "Here are the winners of this year's Nebula Awards"၊ The Verge၊ 20 May 2017။ 12 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထိပ်ချွန်ကျောက်တိုင်ဂိတ်_(စာအုပ်)&oldid=379380" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၇၊ ၁၀:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။